Nezvedu - Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd.
Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd, iri muShanghai, China, hofisi yekutengesa kunze yefekitori. isu Tazvipira kune oleochemicals, zvigadzirwa zvinonamira-zvine chekuita, uye vezvekurapa vepakati, Isu vane mvumo yemhando manejimendi manejimendi system ye ISO9001, yekuchengetedzwa kwenzvimbo system ye ISO14001 uye OHSAS18001, Yakazara mushure-yekutengesa sevhisi, OEM uye Customization sevhisi.
Fekitori yedu iri muChangzhou, Jiangsu Province, Ine nzvimbo inosvika zviuru makumi masere, ine vashandi vanopfuura mazana matatu, mainjiniya makumi matatu, mashopu ekugadzira manomwe, vanopa mishonga vanopa mishonga, zvigadzirwa zvemafuta, zvigadzirwa zvine chekuita neasfactant uye zvimwe zvinogadzira zviri pakati.
Kwemakore, mune huzivi hwe "Hunhu Hwakatemerwa, Tekinoroji Inotungamirwa", kambani yakagadzira yakachena-kuchena mvura phosgene uye inogadzirwa tetraisocyanate, TPPT (tetraisocyanate phenyl ester) inorapa mumiririri yawana nyika yekugadzira patent chitupa neNo99114032x.
Zvichakadaro isu takabatira pamwe fekitori muJian, Jiangxi Province, anoita chirimwa mushoma, kufanana zvinokosha anonhuwirira, zuva nezuva intermediates uye vamwe mishonga makemikari.
NEI TICHISARUDZA US
Yedu yepakati yekugadzira michina inotumirwa zvakananga kubva kuGerman.
2. Simba R & D Simba
Tine makumi matatu mainjiniya, manomwe ekugadzira mashopu, anopfuura gumi Ekuvhura Patents
3. Strict Hunhu Kudzora
3.1 Core Raw Zvinyorwa.
takasarudza vatengesi vedu vezvinhu zvakanyatsoenderana ne "Maitiro eanokodzera" eiyo ISO9001: 2000 yemhando yepamusoro manejimendi sisitimu, Isu tinoseta mafaera nezve vanokwanisa vatengesi ruzivo. Isu tinoita kaviri-kuyedza kubva kune yakasvibirira zvinhu ichipinda mudura kune yekugadzira mutsara
3.2 Yakagadziriswa Zvigadzirwa Kuedzwa.
Iyo yakajairwa bvunzo neyedu yehunyanzvi michina usati warongedza, iyo yakaoma yekuchengetera maitiro uye kuyedzwa isati yatumirwa, isu tinochengeta masampuli eimwe neyakagadzirwa batch yekuteedzera iyo mhando dambudziko.
4. Corporate Tsika
Chiratidzo chinokudzwa chinotsigirwa nekambani tsika. Isu tinonyatsonzwisisa kuti tsika yake yemubatanidzwa inogona chete kuumbwa kuburikidza neImpact, infiltration uye kusangana. Kuvandudzwa kwekambani yedu kwave kuchitsigirwa nehunhu hwayo hwepamoyo mumakore apfuura ------- Kutendeseka, Kugadzira, Mutoro, Kubatana.
Tinogona kugadzira synthesize sevatengi Specification Chikumbiro.
Isu tinopawo kusevha kwemakemikari sevhisi, Sezvo isu tine ruzivo uye tichiziva nezveChina yemusika musika.
Isu tinotarisira nemoyo wese kuti isu tinogona kuve wako akavimbika bhizinesi shamwari mune iyo yekufamba kwenguva.
Sarudzo yako ichaita kuti tive nani!